Free Online AVI in Converter MP4
Isku dayga in la raadiyo avi internetka ah si Converter mp4? Halkan Waxaad tahay! Maqaalkani waxa uu ku talin doonaa inaad hogaanka 5 fiican oo lacag la'aan ah online video converters. Dhammaan iyaga ka mid ah waa wax fudud oo sahlan in ay isticmaalaan. Sidoo kale waxaad ka heli doontaa ah Converter desktop video sare oo awood leh in aan article. Iska akhriso hoos ku qoran si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah.
Converter Zamzar waa mid kale waa in ay haystaan ​​avi online in mp4 video Converter. Si loogu badalo files online la AVI si Converter MP4, kaliya aad u baahan 4 tallaabooyin.
Talaabada 1: Dooro file ka your computer. Fadlan la soco in file waa in ay ahaataa in ka yar 100 MB. Haddii aad file waa in ka badan 100 MB, waxaad isku dayi kartaa in ay verison pro (bixiyo, oo aan lacag la'aan ah).
Tallaabada 2: Dooro qaab file diirada.
Tallaabada 3: Ku qor cinwaanka emailkaaga.
Tallaabada 4: Guji "Beddelaan" inuu ku soo bilowdo.
Hawlaha qaab beddelidda waa yar gaabis ah. Marka aad qaab beddelidda, aanad gelin karo inuu sameeyo waxyaabo kale.
Tani gebi ahaanba waa avi a free online in Converter mp4. 21 qaabab wax soo saarka waa inaad halkaas ka dhergin baahidaada. Waxaad la shakhsiyeeyo kartaa video iyo maqal ah goobaha, tusaale ahaan, xalka laga bilaabo 144p in 1080p, birate ku kala duwan ka 256kbps in 8000kbps. Haddii aad diinta size weyn ee file, waxay ku qaadan karnaa xoogaa waqti ah. Laakiin waa marnaba baaritaan lagu dulqaadasho. Inkasta oo haddii mid ka mid yar, ka dhabayso xawaare sare.
Waa arrin aad u fudud si loogu badalo avi in ​​mp4 la Benderconverter. Its qaab ciyaarin waa video (AVI Video, QuickTime Video, Flash Video, MPEG Video, iyo iwm), audio (MP3 Audio, Waveform Audio iyo Ogg Vorbis). Ma Sidoo kale hadii aanad ogeyn waxa qaab qalab aad taageertaa, Converter avi Tani waxay kuu ogolaanaysaa in aad si fudud u dooro qalab aad ku habboon, oo ay ku jiraan iPhone / iPod / iPad Video, Android Video, sida qaabka wax soo saarka ah. Waxaad si mp4 badalo karaa avi la size file ka yar 100 MB. Haddii in ka badan 100 MB, waxaad u baahan tahay inaad iska diiwaan gelin si ay ugu raaxaystaan ​​faa'iidooyinka dheeraad ah.
Convertfiles badasha xawaare ugu sareeya marka la barbar dhigo dhan kale 4 converters. 2 siyaabaha aad ha loogu badalo avi in ​​mp4. Kaliya Waxaad gali kartaa file ama geli link nuqul sanduuqa banaan ku. Ka dib markii diinta, aad riix link download soo bixi file aad u sarifay ka.
Si ka duwan oo dhan kale video online converters kor ku xusan, Wondershare Video Converter waa software desktop ah. Iyadoo video Converter tan, mana jiri doonaan qaab la dhaafi karin. Waxa ay taageertaa dhow oo dhan oo ah talooyin iyo wax soo saarka videos. Dhinaca kale ee avi si Converter mp4 been in aad u baahan tahay in ay marka hore soo dejisan oo ku xidh. Si kastaba ha ahaatee, ka dib markii la rakibey, kaliya aad u riixi kartaa icon software ah oo ay isku dayaan istareexsan oo aan heli internet.
Sida loo Beddelaan ASF in MP4
> Resource > Video > Top 5 Free Online AVI in Converter MP4